Zvishandiso zveBItcoin - Zvinhu Zvaunogona Kuita Ne Cryptocurrency
Wati wamboerekana wakagumburwa pane zvinyorwa zvakasiyana-siyana maererano ne cryptocurrencies uye wakashamisika Chii chinonzi Bitcoin? Zvakanaka, kana iwe ukadaro, iwe uri muhombe. Kwete vanhu vazhinji vanozviziva uye zvinhu zvaunogona kuita nayo. Edza iko zvino uye uone kushandiswa kwakasiyana kweBitcoin.
Unoda kutanga yako Bitcoin rwendo? Iwe unogona kutanga nekuushandisa iyo pakutengesa kuIndaneti. Inogona kushandiswa senzira yekubhadhara kwezvivako zvakasiyana-siyana zvepaIndaneti nemashandiro. Kubva pachigaro kugadzirisa kusvika kune zvekudya, unogona kutenga zvose ne Bitcoin. Unoziva here kuti chinhu chokutanga chakatenga chakatengwa uchishandisa Bitcoin chaiva pizza? Hongu Ndizvozvo. Saka enda mberi utenge chero chaunoda.
Pakati pemashandisirwo eBitcoin, inonyanya kuzivikanwa ndeyekutamba mitambo yekambani pamwe chete mitambo vachitamba. Yakava iyo yakakodzera kubhadhara sarudzo yekutengesa kwetaneti. Nemhaka yekusaziva kwayo, vanhu vanogona kutengesa pasina kuzarura zvakawanda pamusoro pavo. Munyika dzakawanda, kubhejera hakubvumirwi nemutemo, asi nekuda kweBitcoin kusingazivikanwi, hapana zvibvumirano mumutambo! Uyewo, kubhejera zvinyorwa zvinowanzoita mazuva mashomanana kuti zvigadzire uye zvinodhura zvikwereti zvisingakoshi, asi neBitcoin, kutengeserana hakusi kudhura, uye kubvisa uye mari inowanikwa nokukurumidza. Tanga kutengesa pamitambo yako yemitambo kana mitambo yekasino uye utaure bonus yawakagamuchirwa chete inopiwa kuvashandi veB Bitcoin.
Kunze kwezvinhu zviviri zvataurwa pamusoro apa zveBitcoin, pane chimwe chinhu chaunogona kuita nayo. Kana iwe usingadi kupedza bitcoins yako uye uchida save save bitcoins asi, iwe unogona kuita chaizvo izvo chete. Zvinokwanisika kuzviisa. Iwe unogona kutenga bitcoins mangwanani-ngwanani pamutengo wakaderera uye wakamirira nguva yakakodzera apo kukosha kwacho kuri pachikwiriso chake, wozochidzikinura. Nemhaka yehuwandu hwayo, hahuna kutarisana nemari. Ichi chaive chiri chikonzero chakanaka chekuti vanhu vatenge sezvo ichi chokwadi kwazvo kuti kukosha kwayo kucharamba kuchikwira.